Cabdirashiid Janaan oo soo gaaray Magaalada Muqdisho - Awdinle Online
Cabdirashiid Janaan oo soo gaaray Magaalada Muqdisho
Waxaa goordhaweyd Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho kasoo dagay Taliyaha Nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin oo uu weheliyo wasiirkii amniga Maamaulka Jubbaland Cabdirashiid Janan.
Wararku waxaa ay sheegayaan in diyaarad gaar ah ay kasoo qaadday labadooda Degmada Doolow ee Gobolka Gedo.
rashiid Janan oo Muqdisho ka baxsaday horaantii sanadkii 2020 ayaa hadda Muqdisho imaanaya, isagoo heshiis la gaaray dowladda Federaalka, waxaana la filayaa in Muqdisho lagu dhameystiro heshiiska labada dhinac, lana kulmo Madaxweyne Farmaajo.
Duleedka degmada Beled-xaawo ayaa shalay si weyn loogu soodhaweeyay Cabdirashiid Janan, waxaana soodhaweyntiisa ka qayb qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Previous articleMadaxda dowlad Goboleedyada oo ka baxay Shirka ka socda Afisoyooni
Next articlePuntland oo sheegtay in Farmaajo uu hor-istaagay kulankii Beesha Caalamka & Dowlad Goboleedyada